Health workers led by nurses take part in a demonstration over salaries at Parerenyatwa Hospital in Harare, Tuesday, June, 21, 2022. A strike by health workers has left Zimbabwe's major hospitals in near paralysis, putting further strain on a public health system already in a dire state. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
Health workers led by nurses take part in a demonstration over salaries, at Parerenyatwa Hospital in Harare, Tuesday, June, 21, 2022. A strike by health workers has left Zimbabwe's major hospitals in near paralysis, putting further strain on a public health system already in a dire state. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
A nurse sits in a hospital ward with a patient and watches a demonstration over salaries, at Parerenyatwa Hospital in Harare, Tuesday, June, 21, 2022. A strike by health workers has left Zimbabwe's major hospitals in near paralysis, putting further strain on a public health system already in a dire state. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
A nurse takes part in a demonstration over salaries, at Parerenyatwa Hospital in Harare, Tuesday, June, 21, 2022. A strike by health workers has left Zimbabwe's major hospitals in near paralysis, putting further strain on a public health system already in a dire state. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
A man ponders his next move after being refused medical assistance at Parirenyatwa Hospital in Harare, Tuesday, June, 21, 2022. A strike by health workers has left Zimbabwe's major hospitals in near paralysis, putting further strain on a public health system already in a dire state. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)